Inta badan 5-HTP sidoo kale loo yaqaan oxitriptan (INN) waxaa laga soo miraha hooyo geed Woody fuulitaanka a in West Africa, loo yaqaan Griffonia simplicifolia dhirta.
Waa maxay 5-HTP?
5-HTP ama "L-tryptophan hydroxy" (5-Hydroxytryptophan) waa dabiici-dhaca acid amino iyo waa maamaan iyo dheefshiidka dhexe ee biosynthesis ee neurotransmitters ku serotonin iyo melatonin ka tryptophan. 5-HTP waa diinta serotonin neurotransmitter ah (5-HT), iyadoo la kaashanayo B6.This vitamin dhacdaa labadaba unugyada neerfaha iyo beerka. 5-HTP gudbo caqabad dhiig-maskaxda (halka 5-HT uusan). Yartay 5-HTP sidaas daraaddeed kordhiyaa wax soo saarka ee serotonin.
faa'iidooyinka caafimaad 5-HTP
Si weyn loo isticmaalaa in lagu caawiyo cayilka (labisnaayeen), PMS, jaf, murugada, walaaca, hurdo la'aan iyo dabeecad la qabatimo. 5 HTP kordhiyaa wax soo saarka ee serotonin. heerarka serotonin in habka dareemayaasha jirka waa lagama maarmaanka u ah dhinacyo badan oo nolol maalmeedkeena. Serotonin mas'uul ka yahay dareen qabka si fiican, qanacsanaanta iyo hurdada caadiga ah. Cayilka, PMS, jaf, murugada, walaaca, hurdo la'aan iyo dabeecad la qabatimo ayaa dhamaantood la xiriira heerarka hooseeya ee serotonin. Serotonin kaalin muhiim ah ee gacanta ku cadho, gardarada, heerkulka jidhka, niyadda, hurdada, galmada aadanaha, cunto xumo, iyo shiid, iyo sidoo kale madadaalo matag.
Waxaa la rumeysan yahay hab nololeed ku mashquulsan casriga ah ee walbahaarka iyo caadooyinka cunidda xun u dhigtaa heerarka serotonin ee jirka. Waxaa la og yahay in caro, gardarada, sugid, welwel iyo walaac sababta jidhka in ay sii daayaan serotonin. serotonin Tani waxay markaas u baahan yahay in la buuxsameen by jidhka ka cuntada aad u cuntid. Laakiin ma serotonin waxaa laga helaa tiro badan ee cuntada ugu si jirkaaga uu leeyahay si ay u laftiisa ka dhigaysa cuntooyinka kuwaas oo ka kooban L-tryptophan, sida shukulaatada, miro, muuska, taariikhaha la qalajiyey, caanaha, yogurt, jiis, hilib, kalluun, turkey , digaag, sisinta, noocay, iyo lawska. Sidaa darteed dad badan oo jamasho cuntooyinka ku qoran (dufanka iyo carbohydrates), gaar ahaan marka carabka ku adkeeyay, taasoo keenta korodhka miisaanka, niyad-jabka, madax xanuun, iyo murqo xanuun.
Atkins Cuntada - yareeyo jamasho
waxbarashada Clinical ayaa muujiyay in siyaadinta 5-HTP soo saartaa natiijada wanaagsan ee miisaanka oo yaraada, walaaca iyo diiqadda. Waxaa hagaajinaysaa hurdada iyo yaraynaysaa jamasho carbohydrate in kuwa on cuntada carbohydrate hooseeyo (sida Cuntada Atkins The). Qof kasta oo isticmaalaya barnaamijka miisaan lumis la mid ah Cuntada Atkins waxay la kulmi kari waayeen hoos u dhac ku heerarka serotonin ay sabab u tahay xaqiiqada ah in carbohydrates kicin wax soo saarka serotonin ee jirka. sii daayo serotonin waxaa keena load carbohydrate (sonkor iwm) iyo waxa la rumeysan yahay in sababta aan inta badan jamasho Karbo culeys sida aan rabno in aan sii daayo kicin serotonin this. Marka ay maskaxdu soo saarta serotonin, xiisad waxaa si sahlan. Taa waxaa ka duwan marka maskaxda ay soo saartaa dopamine ama norebinefriin (noradrenaliin), waxaan u muuqdaan in ay ka fekeraan oo si dhakhso ah u dhaqmaan iyo guud ahaan more heegan. Sidaa darteed wax cunaya carbohydrates u muuqataa in ay leeyihiin saamayn ku dejinaaya, halka borotiinada kordhiyo feejignaanta.
Qaadashada supplements 5-HTP joojin kartaa damacsanaayeen this for dufan iyo carbohydrates, iyo sidoo kale jirka oo la siinayo ay tahay inay gacanta ku wada kuwa hawlaha kale ee kor ku xusan, sida cadho, rabitaanka cuntada iyo hurdada.
Caawimada Depression iyo Walaaca
Qaar ka mid ah cilmi-baaris lagu sameeyey galay 5-HTP iyo muujinaysaa waxa ay leedahay awood si ay u caawiyaan la niyad-jabka iyo walaaca ay suurtogal tahay, fawdo argagax, hurdo xumo iyo buurnaanta. 5-HTP u muuqataa in ay leedahay saamaynta la mid ah sida SSRI murugada (Selective serotonin Dib-u-qaadashada Inhibitors).
Dawooyinka loo qoray in kor loogu qaado heerarka serotonin qoro dhammaan dhibaatooyinkaas, laakiin dad badan waxay aaminsan yihiin 5-HTP waa hab dabiici ah si ay u gaadho wax la mid ah.
Waayo, hagaajinta hurdo, waxaa si weyn loo talinayaa in ay qaataan 5-HTP 30 mins ka hor inta sariirta aadin, sida marka laga reebo soo saara serotonin, 5-HTP sidoo kale soo saartaa Melatonin, taas waa hormoon hurdada keenta waxaayna ah. qiyaasta caadiga ah waa mid 50mg ama kiniin 100mg. Saamaynta qaadashada 5-HTP waxaa laga dareemi karaa 10 ilaa 30 daqiiqo gudahood.
Isku day in aad ka iibsan 5-HTP kaas oo sidoo kale ku jira vitamin B6, sida loo baahan yahay B6 FITAMIIN for diinta 5-HTP galay serotonin.
qaadasho badan u muuqdaan in ay loo baahan yahay miisaanka oo yaraada iyo in la yareeyo jaf. Qaadashada ilaa agagaarka 900mg maalintii u muuqdaan in ay si ballaaran u sheegay.
5-HTP waxaa inta badan loo dulqaatay badan ka wanaagsan yahay murugada dhaqanka. Xad-dhaaf ah 5-HTP la rumeysan yahay in lagu metabolized iyo raaca, gaar ahaan marka la Vitamin B6 qaaday.
Waa maxay sababta aan isku dayaan qaar ka mid ah maanta iyo arko haddii aad aad u yareeyo kartaa jamasho, walaaca iyo xanaaq heerarka, iyo sidoo kale hurdo fiican habeenkii!